Ngikhathele ukuncikiselwa ngamavoti: Mthokozisi
SEYIMBANGELA isicefe indaba yabantu abahlala bemfundekela ngamavoti uMthokozisi Ndaba wodumo lwama-Idols, uthi akasafuni ukuzwa ngamavoti ngoba akakweleti muntu Isithombe: INQOLOBANE YESOLEZWE
BONGIWE ZUMA | January 20, 2020
USEKHATHELE ngabantu baKwaMashu abamncikisela ngamavoti, athi awamondli. UMthokozisi Ndaba wakuleli lokishi nowaduma ngomncintiswano ama-Idols SA, ugxekwe ngabaningi ngokubhoboka ngendlela azizwa ngayo ngalo mphakathi, ngesikhathi ethi sebemhlukumeze kwenela.
UMthokozisi owahluleka kowama-Idols ngo-2017, ubhale kwiTwitter ukuthi usegqekezelwe kaningi, wadunwa imoto waphinde wadutshulwa.
Ukhala ngokuthi selokhu ebhoboke ngendlela azizwa ngayo ngobugebengu kule ndawo, useyazondwa ngabantu abalokhu bemtshela ngokuthi bamvotela.
“Angikakaze ngikufihle ukuthi ngingowaKwaMashu nakwithelevishini ngiyasho. Uma belokhu bengincikisela ngokuthi bangivotela, nami ngibabekile ebalazweni ngakho wu-50-50. Abame kancane ngokungibelesela ngamavoti,” kusho uMthokozisi.
Uqhube wathi baningi nabantu asebefuna ukubukwa ngaye njengoba bese bebhala into abayithandayo ezinkundleni zokuxhumana. Uthe uJacinta Ngobese ungomunye walabo bantu, kanti kuze kwadingeka ukuthi amchazele kahle ngezimo asedlule kuzo nokuthi akakweleti muntu ngamavoti awathola.
“Ngibonile uJacinta ebhale ukuthi ngimphoxile, ngaxakeka ukuthi yini ephoxayo uma ngikhuluma ngezinkinga engibhekene nazo. Ungitshele nokuthi wayengusihlalo ngesikhathi ngivotelwa kuma-Idols. Engikwaziyo angikweleti muntu ngalokho. Asihlali endaweni eyodwa mhlawumbe akagqekezelwa njengami. Uyazi ngike ngibingelelwe ngumuntu ngingamuzwa, ngiyozwa esethi wangivotela kodwa sengiyangiziba,” kusho uMthokozisi.
Ethintwa uJacinta uthe alikho elibi analo ngoMthokozisi kodwa ubezama ukumbonisa ukuthi akubona bonke abantu abamonile kule ndawo.
“Ngicabanga ukuthi uthathe ngolaka ngoba akukho lapho bungekho khona ubugebengu kodwa akusho ukuthi sebebabi bonke abantu abahlala KwaMashu kunosomabhzinisi, izifundiswa, abaculi, abasakazi abenza izinto ezinhle emphakathini.
Uma ezobhangqa bonke abantu uzozivalela namathuba. Angilwi naye bengimbonisa ngoba usakhula usenamaphupho njengathi sonke,” kusho uJacinta.
UMthokozisi uphinde wagcizelela ukuthi akakashintshi emazwini akhe, uzimisele ngokutholela umndeni wakhe indawo ephephile, ahambe kuleli lokishi.
Izinhlelo zokuthutha usenazo kodwa uthe ufuna ukuqinisekisa ukuthi uhamba ekhaya konke kusesimeni esifanele, angabashiyi engagculisekile naye.